Mibaiko Ireo Ankizy Lehibe Hitsidika Ny Ray Aman-drenin’izy ireo I Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2013 2:57 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Swahili, srpski, Español, Italiano, 日本語, русский, Aymara, polski, English
Natao io lalàna io satria miha-antitra ny vahoaka any Shina noho ny politikan'ny zaza tokana. Nitatitra ny The journal fa maherin'ny 14 isanjaton'ny vahoakan'i Shina, na vahoaka 194 tapitrisa, no maherin'ny 60 taona, araka ireo antontanisa farany indrindra avy amin'ny Birao Nasionalin'ny Antontanisa. Amin'ny 2030, hiakatra avo roa heny io tarehimarika io.
Ankoatra izay, hatramin'ny 2012, tratran'ny krizy ny rafitra fanomezana ny fisotroan-dronono ao Shina amin'ny fatiantoka 2.9 lavitrisa dollars amerikana. Manahy ireo tanora Sinoa ny amin'ny hangatahana azy ireo hanohana ireo misotro ronono avy ao amin'ny fanjakana.
Nanoratra [zh] am-panesoana i “Zhuomo Xiansheng”, ilay olo-malaza ao anaty aterineto :
Naneho [zh] fihetseham-po sahala amin'izay ny mpisolovava Yang Lei :
Nieritreritra [zh] ny mpanolotra TV, Cao Baoying, fa làlana iray hialan'ny governemanta ny andraikiny io lalàna io:
Nitondra izao famaranana izao [zh] ny olona iray mpitsikera ny vaovao ao amin'ny ifeng: